Black list ထဲ ထညျ့သှငျးခံရတဲ့ ရကျဖို့ ကစားသမား ၂ ယောကျ ချေါယူလိုကျတဲ့ အကွောငျး အပါအဝငျ မနကျခငျး သတငျးတိုမြား – 7Day Update News
Black list ထဲ ထညျ့သှငျးခံရတဲ့ ရကျဖို့ ကစားသမား ၂ ယောကျ ချေါယူလိုကျတဲ့ အကွောငျး အပါအဝငျ မနကျခငျး သတငျးတိုမြား
-ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ အသကျ(15)နှဈအရှယျ ဂိုးသမား Tom Wooster ကို ဘနျစလေ အသငျးမှချေါယူခဲ့ပွီး အသကျ(15)နှဈအရှယျနောကျခံလူ Jack Kingdon ကို လညျးမျောရီကနျဘီ အသငျးမှ ချေါယူလိုကျ ကွောငျးသိရသညျ။
-လှနျခဲ့သညျ့ (1992) ခုနှဈ ဒိလိုနမြေို့းတှငျ ဂန်တဝငျ ကစားသမား အဲရဈကနျတိုနာသညျ ယူနိုကျတကျ အသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့သညျ့နတေ့ဈနဖွေ့ဈသညျ။
-ဗွိတိနျဘုရငျမကွီးရဲ့ MBE ဘှဲ့ကို ခြီးမွှငျ့ခွငျးခံထားခဲ့ရတဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတိုကျစဈမှူး မားကပျဈ ရကျရျှဖို့ဒျအနနေဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ထိပျတနျးလူမညျးပုဂ်ဂိုလျမြားစာရငျးဖွဈတဲ့ Football Black List မှာ ထညျ့သှငျးဂုဏျပွုခံခဲ့ရ‌ကွောငျးသိရပါသညျ။
– နယျသာလနျနောကျခံလူ တီမိုသီ ဖိုဆူမနျဆငျကို ယခုဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ ရောငျးခသြှားဖို့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျတာဝနျရှိသူတှေ ဆုံးဖွတျထားကွောငျးသိရပါသညျ။
– တိုကျစဈမှူး အနျတိုနီ မာစီယယျလျဟာ အထောငျတိုကျစဈမှူးတဈဦး မဖွဈသငျ့ကွောငျး ပေါလျစခိုလကဆိုခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ဂိုးကို ကြောပေးကစားပုံတှဟော ဆိုးရှားပွီး အခှငျ့အရေးတှကေို အသုံးခမြှုမှာလညျး တှဝေနေသေညျဟုဆိုပါတယျ။
Diego Maradona: :အကယျ၍ မနျယူနိုကျတတျကမြားနညျးပွတဈဦးလိုအပျလို့ရှိရငျ နညျးပွအဖွဈနဲ့ကနြျောလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
သူတို့ကကမ်ဘာတလှားမှာ သူတို့အသငျးရဲ့ရှပျအကြီတှအေမြားကွီးရောငျးကွရတယျ။ဒါပမေဲ့ သူတို့ဆုဖလားတှလေဲယူဖို့လိုအပျပါတယျ။ကနြျောသူတို့အတှကျအလုပျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
Rip Legend ???
-ယနေ့ ဟာ ယူနိုကျတကျရဲ့ညာနောကျခံလူ ဝမျဘဈ ဆာကာရဲ့ အသကျ (23) နှဈပွညျ့မှေးနဖွေ့ဈတယျလို့သိ ရပါတယျ။ မှေးနမှေ့ာပြျောရှငျပါစေ။
HAPPY BIRTHDAY TO AARON! ❤
-ယူနိုကျတကျတိုကျစဈမှူး ရပျရျှဖို့ဒျသညျ BBC သတငျး ဌာနမှပေးအပျမညျ့ (2020) Sport Personality ဆုကို ရရှိခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ ယငျးဆုကို လမညျ့လ၌ ခြီးမွှငျ့ သှားမညျဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ (2020) ခုနှဈအတှငျး ရပျရျှဖို့ဒျ၏ ကလေးသူငယျမြားအတှကျ အစားအစာလုံလောကျရေး လုံ့ဆျောခကျြကွောငျ့ ယငျးဆုကိုရရှိခဲ့ ခွငျးပငျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Black list ထဲ ထည့်သွင်းခံရတဲ့ ရက်ဖို့ ကစားသမား ၂ ယောက် ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ အကြောင်း အပါအဝင် မနက်ခင်း သတင်းတိုများ
-ယူနိုက်တက်အသင်းသည် အသက်(15)နှစ်အရွယ် ဂိုးသမား Tom Wooster ကို ဘန်စလေ အသင်းမှခေါ်ယူခဲ့ပြီး အသက်(15)နှစ်အရွယ်နောက်ခံလူ Jack Kingdon ကို လည်းမော်ရီကန်ဘီ အသင်းမှ ခေါ်ယူလိုက် ကြောင်းသိရသည်။
-လွန်ခဲ့သည့် (1992) ခုနှစ် ဒိလိုနေ့မျိုးတွင် ဂန္တဝင် ကစားသမား အဲရစ်ကန်တိုနာသည် ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။
-ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးရဲ့ MBE ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံထားခဲ့ရတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူး မားကပ်စ် ရက်ရ်ှဖို့ဒ်အနေနဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့ ထိပ်တန်းလူမည်းပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းဖြစ်တဲ့ Football Black List မှာ ထည့်သွင်းဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရ‌ကြောင်းသိရပါသည်။
– နယ်သာလန်နောက်ခံလူ တီမိုသီ ဖိုဆူမန်ဆင်ကို ယခုဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ရောင်းချသွားဖို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေ ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းသိရပါသည်။
– တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာစီယယ်လ်ဟာ အထောင်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦး မဖြစ်သင့်ကြောင်း ပေါလ်စခိုလကဆိုခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဂိုးကို ကျောပေးကစားပုံတွေဟာ ဆိုးရွားပြီး အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးချမှုမှာလည်း တွေဝေနေသညျ ဆိုပါတယ်။
Diego Maradona: :အကယ်၍ မန်ယူနိုက်တတ်ကများနည်းပြတစ်ဦးလိုအပ်လို့ရှိရင် နည်းပြအဖြစ်နဲ့ကျနော်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ကကမ္ဘာတလွှားမှာ သူတို့အသင်းရဲ့ရှပ်အကျီတွေအများကြီးရောင်းကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆုဖလားတွေလဲယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျနော်သူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
-ယနေ့ ဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ညာနောက်ခံလူ ဝမ်ဘစ် ဆာကာရဲ့ အသက် (23) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့သိ ရပါတယ်။ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။
-ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူး ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်သည် BBC သတင်း ဌာနမှပေးအပ်မည့် (2020) Sport Personality ဆုကို ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဆုကို လမည့်လ၌ ချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် (2020) ခုနှစ်အတွင်း ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်၏ ကလေးသူငယ်များအတွက် အစားအစာလုံလောက်ရေး လုံ့ဆော်ချက်ကြောင့် ယင်းဆုကိုရရှိခဲ့ ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နယူးကာဆယျ ခြဲလျဆီး အသငျးတို့ကို ပွောငျးရှဖေို့ နီးစပျ ခဲ့ကွောငျး ပွောပွခဲ့တဲ့ ဝိနျးရှနျးနေး
ပရိတျသတျတေ အံ့အားသငျ့ ခဲ့ရတဲ့ လငျဒီလောဒျ့ရဲ့ စှမျးရညျ အသဈ